Ahoana ny fametrahana ny fanarenana amin'ny LG G2 tsikelikely | Androidsis
Ao amin'ity lesona ity Hasehoko anao ny fomba fametrahana ny Fanarenana voaova ao amin'ny LG G2 modely D-802 iraisam-pirenena y D-800 an'ny orinasa AT & T.
Tsotra be ny fizotrany ary ampy ny misintona ny rakitra mifanaraka amin'ny maodely manokana an'ny LG G2 ary safidio ny karazana fanamboarana novaina hapetraka. Azontsika atao ny misafidy ny ClockworkMod Recovery ary ny TWRP.
1 Fa maninona no avereno fanarenana voaova?
2 Fepetra takiana ao an-tsaina
3 Mametraka ClockworkMod Recovery amin'ny LG2
4 Fametrahana TWRP Recovery
5 Ahoana no fomba hidirako amin'ny fanarenana vaovao novaina?
Fa maninona no avereno fanarenana voaova?
Mahaliana ny mametraka a Fanarenana voaova, na inona izany na inona, satria avy ao aminy no misokatra ny safidy vaovao izay tsy hitantsika amin'ny fanarenana serial an'ny terminal misy antsika Android.
Manana safidy mahaliana toy ny fanaovana a nandroid backup o nomaniny ho solon'izay ny rafitray iray manontolo mba haka azy io, raha ilaina, avy amin'ny terminal mihitsy ary tsy mila solosaina manokana.
Iray amin'ireo fampiasa hafa atolotry ireo ho antsika Fanarenana voaova, dia ny mety hametrahana na romana nandrahoina hanavao ny terminal any ivelany amin'ny LG sy ny orinasany manana.
Raha liana amin'ny fametrahana ianao Rôma nandrahoina ao amin'ny LG G2 malahelo ny fizarana an'ny Rom en Androidsis avy amin'izany no hanolorantsika ireo asa tsara indrindra hitantsika amin'ireo dinika fampandrosoana samihafa Android.
Alohan'ny hanohizan'ity fampianarana ity dia mila mampitandrina anao aho fa manova ny fanarenana ny antsika LG G2, ho resy ho azy isika ny fahamarinan'ny fiantohana ofisialy ny vokatra atolotray anay LG mandritra ny roa taona.
Ny fepetra ilaina voalohany dia ny fananana ny iray amin'ireo maodely roa an'ny LG G2 mifanaraka amin'ity fampianarana ity, araka ny nolazaiko anao tamina fotoana lasa izay, ity dia mihatra amin'ny D-802 iraisam-pirenena sy ho azy D-800 an'ny orinasa AT & T.
Mametraka ny ClockworkMod Recovery mila manana ny terminal ihany koa isika teo aloha miorim-pakaRaha tsy fantatrao ny fomba hanatanterahana izany dia manasa anao aho mandalo an'ity lesona ity ianao izay hanazavako anao amin'ny antsipiriany.
Ho fanampin'izany rehetra izany dia tsy maintsy manana mpamily ny terminal napetraka marina ao amin'ny solo-saintsika isika Windows, ny baterian'ny LG G2 tsy maintsy ampangaina amin'ny 100 × 100 hialana amin'ny olana mety hitranga ary koa Famafana USB afaka amin'ny safidy fampandrosoana.
Mametraka ClockworkMod Recovery amin'ny LG2
Ity dia iray amin'ireo safidy roa tokony hametrahantsika fanarenana voaova amin'ny antsika LG G2. Mba hametrahana ity CWM Recovery ity dia tsy maintsy manana ny LG G2 miorim-paka ary araho ireto torolalana ireto:
Voalohany indrindra dia mifidy ny ZIP misintona araka ny maodelinay LG G2:
Files ilaina amin'ny International D-802
Files ilaina amin'ny AT&T D-800
Raha vantany vao alaina araka ny maodelintsika ny rakitra ZIP, esorinay amin'ny zotram-pitaovantsika na aiza na aiza amin'ny PC-tsika izany, ampifandraiso amin'ny alàlan'ny USB ny LG G2 ary anaovana ilay rakitra. flash_rec Recovery_windows.bat. Izao sisa no hataonao dia ny manaraka ny torolàlana eo amin'ny efijery.
Mandritra ny fizotrany dia hanome antsika safidy eo anelanelan'ny Recovery ara-dalàna azontsika atao amin'ny alàlan'ny fanalahidin'ny volavola na a Fanasitranana mikasika.
Fametrahana TWRP Recovery
Tsy toy ny fanarenana teo aloha, hametrahana ity TWRP Recovery tsy mila mpampiasa root isika.
Raha hametraka azy dia ho ampy miaraka ampidino ao amin'ny ZIP ity rakitra voahenjana ity, esory izy io na aiza na aiza ao amin'ny Windows, ampifandraiso ny LG G2 mankany amin'ny solosaina amin'ny alàlan'ny USB ary alefaso ilay rakitra fanarenana.bat, avy eo manaraka ny torolàlana eo amin'ny efijery an'ny PC ary dia izay.
Este Recovery manana ny toetrany azo tsapai-tanana ary mamela anao handrehitra rakitra maromaro indray mandeha.
Ahoana no fomba hidirako amin'ny fanarenana vaovao novaina?
Amin'ireo tranga roa ireo, raha te hiditra amin'ilay fanarenana vaovao napetraka dia tsy maintsy ataontsika manomboka amin'ny terminal famaranana ary manaraka an'io bokotra mitambatra:
Bokotra fihazonana Mihena ny bokotra Power plus volume notsindriana mandra-pahatongan'ilay sary famantarana ny LG, avy eo avoakanay vetivety izy ireo hanindriana ny bokotra roa tonta amin'ny fotoana iray. Raha nanao azy tsara isika dia hiseho ny efijery iray a Hard reset al LG G2, eo amin'ity efijery ity dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra fahefana indroa misesy ary ho eo amin'ny efijery lehibe an'ny famerenana vaovao napetraka isika.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fomba hanongorana LG G2 tsikelikely
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ahoana ny fametrahana ny fanarenana voaova amin'ny LG G2
manala ireo logo mpiasan'ny AT&T ity ?????
Tsia, amin'ity no ahafahanao mahazo ny fanarenana hahafahanao mametraka rôma efa masaka, raha te hanana firmware madio avy amin'ny fako ataon'ny mpandraharaha ianao dia ampy ho anao ny misintona rindrambaiko ofisialy ary alefaso amin'ny rindrambaiko LG
Luvalab dia hoy izy:
Azo atao ve ny miverina amin'ny Stock Recovery rehefa avy nametraka ny iray tamin'izy roa ireto?
Valiny tamin'i Luvalab
Raha manamboatra Firmware tany am-boalohany
Misaotra !! Bilaogy tena tsara ho an'ny mpampiasa G2 sy android amin'ny ankapobeny!
Salama, gonzalo aho ary hividy LG G2 miaraka amin'ny maodely D805, ho an'ny Amerika Latina rehetra izany. Azonao atao ve ny mahita raha misy fomba fiasa momba ny
Fanarenana voaova ... misaotra amin'ny fanampianao
Salama Francisco, hanana ireo rakitra ao amin'ny D803 ve ianao?
Salama namana nametraka ahy tao meu g2 d802 na cwm manana ny fomba fametrahana na twrp aho? Tutorial momba ny volo Parabens.
Salama rehefa manandrana mametraka ny TWRP aho dia tsy mahomby ary tsy misy hita ao amin'ny fomba fanarenana. Misy hevitra ve izay tsy mety ataoko? Manana ny maodely ATT aho
Manana ny mpamily napetrakao ve ianao? Manana debugging USB ve ianao? Mifandray amin'ny alàlan'ny PC fotsiny ve ianao?
CREPS dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao? Misaotra anao amin'ny ankapobeny momba ny fampianarana, efa ato amin'ny tianao izy io. Mpampiasa vaovao aho ary azoko tsara ny fomba fiasa rehetra ... saingy manana fisalasalana aho: inona no dikan'izany fa afaka mandeha ny USB, ahoana no ahitako an'izany, ahoana no ahafantarako fa manana ny mpamily rehetra napetraka ao amin'ny pc aho ary farany, inona karazana fanarenana angatahina, root na tsy root? Misaotra sy arahaba avy amin'ny CD an'i Mexico!
Valiny amin'ny CREPS
Raha manana ny PC Suitte ianao ary nampifandray ny finday tamin'ny PC dia apetrakao izy ireo, toy ny deboka usb, raha tsy manana ny menan'ny developer ianao dia ampidiro ny fampahalalana momba ny rindrambaiko ary tsindrio impito misesy amin'ny isa fanangonana ary rehefa miverina amin'ny menio Settings dia hiseho ny fizarana vaovao antsoina hoe safidy mandroso.
Raha ny momba ny fanarenana dia samy tsara avokoa na dia manoro hevitra ny Root foana aza aho na dia hametraka ny TWRP aza ianao.
namana videotutorial hanongotra ny G2 4.4.2
Alejandro Zea Caicedo dia hoy izy:
Salama, tsara ny fampianarana, saingy misy ny fanontaniana mipetraka, ilaina amin'ny KitKat kinova 4.4.2 na tsy maintsy sintomiko ny Jelly Bean 4.3.2 raha izany, mankasitraka tutorial mampihena aho misaotra, ary manome ny romana ardedev v2 aho.
Valiny tamin'i Alejandro Zea Caicedo
Francisco a favor, ny lg g2 d805 dia nijanona, rehefa tsindrio ny bokotra dia miseho ilay logo ary lasa izy, fa tsy mamono ny findaiko io, azafady mba ampio aho
Manana LG G2 D802 aho, vita tao KOREA, izay tsy azoko nampiasaina satria tsy mandray signal, avy any Venezoelà aho afaka manampy ahy ianao, tsy maintsy novaiko izy io mba hahafahako mampiasa azy, hoy i LG Venezuela no ananany ilay 805.
Tsara fanahy be i Francisco raha nametraka indray ireo rohy satria amin'ny mega dia voafafa izy ireo.
Misaotra tamin'ny tutorial.
frederick dia hoy izy:
Valiny amin'i frederick
Pepa dia hoy izy:
Eny, rohy tsy miasa fa tena ilaina!
Miseho ny mari-pamantarana ny ZTE nubia Z5S mini